त्यो दिन दिनेशलाई आ’शंका गरेर घरमै भेट्न पुग्दा….! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकात्यो दिन दिनेशलाई आ’शंका गरेर घरमै भेट्न पुग्दा….!
काठमाडौं- १३ वर्षीया नि’र्म’ला प’न्तको घ’टना भएदेखि प्रहरीले धेरै आ’लोचना खेप्दै आएको थियो। एकाएक भा’गर’थी भट्टको घटना सार्वजनिक भयो। यस घ’टनाको पनि दो’षी पत्ता लगाउन नसके प्रहरीप्रति सर्वसाधारणको दृ’ष्टिकोण के होला भन्ने चि’न्ताले धेरै पि’रोल्यो। मैले आफूलाई घ’टनाको केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गर्ने ज’मर्को गरें, जुन पी’डा भा’गर’थीकी आमालाई थियो। हामीले विभिन्न शं’काले हे’र्‍यौं। कतै सँगै पढ्ने साथीबाटै त यो घ’टना भएन भन्ने लाग्यो। अनुसन्धान त्यतातिर मो’ड्यौं।
भा’गर’थी कति बजे स्कुलबाट बा’हिरिइन् ? उनीसँग कोको थिए ? यस्ता सू’चना ब’टुल्दै जाँदा कक्षा ११ पढ्ने आ’रोपित छा’त्रको व्य’वहार शं’कास्पद देखियो। भा’गर’थीको पछि–पछि दिनेश नै लागेको केही विद्यार्थीबाट थाहा भयो। यो र’हस्य भा’गर’थीको श’व फेला परेको तेस्रो दिनदेखि खु’ल्यो। उनलाई सोधपुछ गर्दा करिब ३५ मिनेट उनी कहाँ गए भन्ने विषय र’हस्यमय बन्यो। उनलाई ल’वलेक जंगलकै आ’सपास देख्ने व्यक्तिसँग प्रहरीले स’नाखत (पुष्टि) गरेपछि हाम्रो अनुसन्धान उनीसँग नै बढी के’न्द्रित भयो’। भा’गर’थी माघ २१ गते करिब २ बजे खो’चलेक बजारमा देखिएकी थिइन्।
उनी पौने १ बजे पढाइ पूरा न’गरी नि’स्किसकेका थिए। बीचमा देख्नेले पनि भा’गर’थीको पछिपछि ला’गेर दिनेश हिँडेको बताएका थिए। हामीले अनुसन्धानमा दुई सयभन्दा ब’ढीलाई सोधपुछ गर्‍यौं। २२ जनालाई त शं’काकै घेरामा राखेर के’रकार गर्‍यौं। तर, उनको व्य’वहार, बयान र अन्य प्रा’माणिक वस्तुले उनी मुख्य आ’रोपी हुन् भन्नेमा कुनै दु’विधा रहेन। अनुसन्धानका विभिन्न वि’धि हुन्छन्। जुन दिन म आफैं कुकुर लिएर घ’टनास्थल पुगें, त्यही दिन दिनेश घ’टनास्थलमा पुगेनन्। हामीलाई शं’का त्यहीँ ला’ग्यो ।घरमा पनि उनले ड’राएजस्तो व्यवहार गर्ने र छ’ट्प’टाउने गरेको पाइयो।
फागुन ३ गते दिनेशलाई स’म्झाइबुझाइ के’रकार गर्दा बल्ल घटना स्वि’कारे। उनले पुरानो रि’स’इ’बीका कारण यस्तो गरेको बताए। अन्य प्र’माणले पनि उनी नै आ’रोपी हो भन्ने संकेत गरेपछि हामी नि’क्र्योलमा पुग्यौं। यो घटनामा उनी नै सं’लग्न हो भन्ने पुष्टि भयो। पो’स्ट’मा’र्ट’म रिपोर्टले भा’गर’थीको घाँ’टी थि’चे’र ह’त्या भएको र यौ’न स/म्प/र्क/समेत भएको देखाएको थियो। हामीले प्रहरीकै वि’धिविज्ञान प्र’योगशालामा श’व, कपडा र शरीरका विभिन्न भा’गमा लागेका चो/टको नमुना पठाएका छौं। त्यसको रि’पोर्ट आएपछि थप प्र’माण ब’लियो हुन्छ। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।